देउवालाई प्रम ओलीको जवाफ: राम्रो कामको जस जसले लिएपनि हुन्छ (पूर्णपाठसहित) – Muktinath Times
3 years ago Sunday, January 6, 2019muktinathtimes
पुस २२, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तलाई सरकारले न्याय दिने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले अन्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरी चेलीहरुलाई न्याय सडकमा पोखिने अमर्यादित एवं अराजक भीडले दिने हैन सरकारले दिने दाबी गरेका हुन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
उनले अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हात पारेको स्पष्ट पारे । ‘केही घटनाहरु अपवादको रुपमा रहेका छन्। त्यसलाई टुंगोमा पुराउन सरकार सक्रिय छ,’ उनले भने, ‘अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र सफलतालाई ओझेलमा पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले रेल र पानी जहाज सञ्चालन हुने भन्दै धैर्य गर्न पनि आग्रह गरे । ‘कुनै समय म सम्झिरहेको छु पानी जहाजको कुरा गर्दा कागजको टुक्रा फालियो। रेलको कुरा गर्दा खाली बाल्टीहरु लाइनमा राखियो कहिले गुडिया रेल ल्याएर खेलाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सुनेको छु जहाजको टिकट काटौँ भनेको काउन्टर खोइरु नपत्याउनेहरु आज अब त हुन्छ भन्ने भएछ र कमसेकम टिकट काट्ने ठाउँ खोज्न थाल्नु भएछ।’
उनले रेल र पानी जहाज आउने भन्दै धैर्य गर्न सुझाव दिए। ‘धैर्य गरौँ। रेल आउँछ। पानी जहाज आउँछ। टिकट काट्न पाइन्छ। काउन्टर खुल्छ। त्यसको सूचना पनि हुन्छ। म साथीहरुलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
त्यस्तै उनले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई धमिलो पानीमा माछा पार्ने रहर नगर्न सुझाव दिँदै राम्रो काम जसले गर्छ उसले जस लिने बताएका छन् ।
संसदमा आज संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई जवाफ दिदै भने, ‘ राम्रो कामको ज–जसले जस लिएपनि हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमम सदनको सर्वस्वीकृत हो । यसको जस पनि सदनले पाउनुपर्छ । यसमा कसको प्याटेन्ट राइट छैन । किन दन्तबझान गर्ने ? किन खिसीटीउरी गर्ने ?’ ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका राम्रा कामप्रति प्रतिपक्षले सहन नसकेको भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्न भुल्न नहुने बताए ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन
– अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दे त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु हो । त्यसको लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवश्यक छ ।
– हामी अहिले यस आर्थिक बर्षको सरकारको नीति/कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धबार्षिक समीक्षाको क्रममा छौं । सरकार आफ्नो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो ।
सूचकहरुकै आधारमा नीति/कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वन सहि छ या गलत, त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो ।
– मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची छैन । गर्नुपनि छैन, गर्नुछ त मुलुकको विकास । अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ? त्यसैले आज यस सम्मानित सदनमा म उठेका वा उठाइएका रङ्गी विरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि यस आर्थिक बर्षको नीति÷कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका बारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
– त्यसैले यस सरकारले, यसबर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो। यस्तो संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तिमा पनि पाँच पक्षमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक थियो ।
– प्रतिपक्षको तर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– “कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको? कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छ? गर्न खोजेको के हो? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको?” म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकासको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावस्यक ५०/६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमती कै आधारमा समायोजन प्रकृया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा “पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने” रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।
– पहिलोचोटी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट र लेखा प्रणाली बुझ्न र बुझाउन केही अलमल जस्तो देखिए पनि अब यसले आफ्नो मार्ग पहिल्याएको छ।
– बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि मैले राजश्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पूँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात/निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई ७ वटा सूचकको रुपमा लिएको छु ।
– चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
-हालसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु परेको छैन । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १०८ अर्ब ८४ करोड रुपैंया आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको थियो।
– गत आर्थिक बर्षको यसै अबधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग/व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
– भारत तर्फको निकासीमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २००६/०७ यताको सबैभन्दा उच्च हो ।
– संयुक्त राज्य अमेरिका तर्फको निर्यातमा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४/१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
– जर्मनी तर्फको निकासीमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४/१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
– प्mलागशिप कार्यक्रमहरु मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रगति स्वभाविक र सकारात्मक छ । यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
–३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य बोकेको बबई सिंचाई आयोजनाबाट हालसम्म २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई व्यवस्था भएको छ ।
–पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई काकरभिट्टा–बुटवल खण्डसम्मको निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम जारी छ । बुटवल–कञ्चनपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
– काठमाडौ–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रगति उत्साहबर्धक छ ।
– मैले भइरहेका कामको सांकेतिक जानकारी मात्र यो सम्मानित सदनमा चर्चा गरेको हुँ । बनेका नियमावली, सफ्टवेयर एप… आदिलाई मैले आवस्यक र स्वाभाविक कामको रुपमा लिने गरेकोले यी विषयहरुमा चर्चा गरिरहन आवस्यक ठानेको छैन । सफ्टवेयरको तयारी र ‘गो–डिजिटल वे’ मा प्रगति भएका छन्, हुँदैछन् । हाम्रा सम्पूर्ण सूचनाहरुको एकीकरण गर्ने र मुलुक र आफ्ना नागरिकहरुको जानकारीको गोप्यता सरकारको सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित गर्ने कार्य भइरहेको छ । कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको छ । यसलाई अटोमेशन, वेव पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाईंदैछ । प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको छ ।
– सामाजिक सुरक्षा नागरिकको हक हो । २५ वर्ष अघि ७५ वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैंया भत्ता दिँदै शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले यस वर्षबाट गुणात्मक फड्को मारेको छ । हरेक वर्ष मंसिर ११ गतेका दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइने निर्णयसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।
– मेरो भनाई यत्ति मात्र हो, गएको मंसीर ११ गतेबाट मैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएँ, सबैले राम्रोसँग थाहा पाउने गरी ।
– यो उपलब्धि मेरो एक्लो वा मेरो दलको मात्रै भनेर मैले कही भनें ? यस आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम यस सदनले सर्वसम्मतीले पारित गर्यो । त्यसैमा उललेख भए बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू हुँदा त्यसको जस सिङ्गो सदनले पाउनु पर्छ । यसको श्रेय सबै मिली लिऊँ ।
– तसर्थ, यति सानो कुरामा दन्त–बजान किन ? साथीहरुको दाबीलाई आधार मान्दा पनि ‘आफैंले ल्याएको’ कार्यक्रमप्रति खिसिट्युरी किन? जस थाप्न हानथाप गर्नुभन्दा हामीहरुले यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने कसरी त्यसमा पो बहस गर्नु पर्ने, होइन र ? राम्रो काम थालिएको छ, सबैको हित हुन्छ ।
अरु पनि यस्तै राम्रा कामहरु अब अगाडि बढ्छन्, हरेक दिन एक कदम अगाडि ! म साथीहरुलाई प्रतिक्रियात्मक हैन, रचनात्मक हुन आग्रह गर्दछु ।
– म यस सम्मानित सदनमा सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गरिरहेको छैन ।
– यस आर्थिक वर्ष भित्र निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाहरु सम्पन्न हुने र नयाँ योजनाहरुको शिलान्यास हुँदैछन् । ती मध्ये यही माघ महिना भित्र झण्डै छ दर्जन परियोजनाहरु केहीको उद्घाटन र केहीको शिलान्यास सम्पन्न हुँदैछन् ।
– नेपालीको रेल सपनालाई पूरा गर्न वितेका केही बर्षदेखि मैले आफ्नो पहल र प्रयत्नलाई शिथिल हुन दिएको छैन । हाम्रो मुलुकको विकासको लागि रेल–वे र वाटर–वे, गेम चेञ्जर हुने तथ्यलाई अफवाहको तुँवालो भित्र पुरिदिने प्रयासलाई मैले अभिरुचिका साथ नियाली रहेको छु ।
– मैले स्मरण गरिरहेको छु, कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो । अहिले पनि सुनेको छु– जहाजको टिकट काटौं भनेको, काउण्टर खै ?हिजो नपत्याउनेहरु समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेमा म खुशी व्यक्त गर्दछु ।
धैर्य रहौं– रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ । स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ ।
– सुचना प्रविधिमा पँहुचका लागि १३७१ वटा वडा, १४६० विद्यालय र १०६३ स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराईएको छ ।
– शिक्षामा, मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलले काम गरीरहेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आप्mनो कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यद्यपि यस सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षामा नीजि क्षेत्रको सहभागिता हुनै नहुने र विद्यालय शिक्षामा नीजि क्षेत्र नभै नहुने जस्ता अनौठा विरोधाभाष प्रकट भइरहेको छ ।
– अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । केही घटना अपवादको रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार सक्रिय छ । अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र उल्लेख्य सफलतालाई ओझेल पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुचित प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ।
हिमाली क्षेत्रका २० जिल्लामा हिमपात हुँदा हुने चिसोको प्रकोपबाट अति विपन्न परिवारलाई बचाउन ५/५ लाख रुपैयाँ निकाशा दिईएको छ । शीतलहर र आगलागिका घटनामा परेका विभिन्न जिल्लाका पीडित परिवारलाई करिव ६ हजार थान राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
– म फेरी एकपटक उल्लेख गर्न चाहन्छु, शान्ति प्रकृया मूलतः टुँगिएको छ । द्वन्द्वका घाउ–खतलाई मलहम पट्टी लगाई अन्तिम रुप दिने काममा सरकार सजगताका साथ सक्रिय छ ।
– संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध विष–वमन हुँदा कसैकसैले त्यसैमा स्वाद मान्यौं । आज त्यो ‘तिर’, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । कुनैसमय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधी खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अनाहकमा अफवाह फैलाईयो । त्यस्ता हरकतबाट संसद कति बद्नाम भयो र अतिवादलाई कसरी मलजल गर्यो? त्यस्ता हरकत, असोज १८ र माघ १९ को तयारी थियो भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट नै छौं । अहिले, सबै सांसदहरुलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै, चालक तथा नीजि सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचार प्रसार भईरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं ।
– हाम्रो संसद सचिवालयले होस नपुर्याइ कुनै त्रुटी भएको भए सजग होउँ, सच्याउँ । जानी नजानी हामी मध्ये कोही कसैबाट कमी भएको छ भने सच्चिउँ । एउटाले विराउँदा सिङ्गो संस्था बदनाम हुनेमा सचेत होऔं । “घुँडा चुसेर” अघाइन्न भन्ने लोकोक्ति स्मरण गरौं। व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । आँच आउन नदिउँ, पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिऊँ, जोगाऊँ ।
शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, आज सात विन्दुले घट्यो
कतारलाई पानी बेच्ने तयारीमा नेपाल, दुई देश बिच छलफल हुदै
मन्त्री अधिकारीको गृहनगरमा श्रदान्जली शुरु,रामघाटमा अन्त्येष्टि गरिने
नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध पक्राउ पूर्जी